केकी र वेनिशा, जसलाई सानै भूमिका पनि चित्त बुझ्यो – Mero Film
केकी र वेनिशा, जसलाई सानै भूमिका पनि चित्त बुझ्यो
अभिनेत्री केकी अधिकारी फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को प्रचार छाडेर पूर्व पुगिन् । उनी, पूर्व पुग्नुको मुख्य कारण हो, फिल्म ‘नाई नभन्नु ल ५’को सुटिङ ।
यो फिल्ममा उनको लामो रोल छैन । तर, पनि केकीले सानै रोल भएपनि गर्न रहर गरिन् । किनकी, यो एउटा ब्रान्ड फिल्म हो । जुन फिल्म चल्दा केकीलाई पनि फाइदा हुनेछ । जसले गर्दा केकी अहिले यो फिल्मका लागि केहि दिन समय छुट्याएर पूर्व पुगेकी हुन् ।
केकीलाई मात्र होइन, अभिनेत्री वेनिशा हमाललाई पनि अहिले सानो भूमिकाले तानेको छ । वेनिशा फिल्म ‘चंगाचेट’मा केमियो भूमिकामा काम गर्दैछिन् । यो फिल्म भित्र अभिनेत्री नै अभिनेत्री छन् । प्रियंका कार्की, परमिता राणा, सुरक्षा पन्त यो फिल्मका मुख्य अभिनेत्री हुन् । अब, वेनिशा पनि फिल्ममा थपिएकी छिन् ।
फिल्ममा बेनिशाले केमियो मात्र काम गर्न लागेकी छिन् । वेनिशाले आखिर, एउटा चर्चित ब्यानरको फिल्ममा केमियो गर्नुको कारण के त ? उनी पनि केकी जस्तै सानै भूमिका भएपनि चल्ने अपेक्षा गरिएको फिल्मसँग जोडिन चाहन्छिन् । आफूले मुख्य अभिनेत्रीको भूमिका निर्वाहा गरेको फिल्म नचलेपछि के केकी र वेनिशा साना भूमिका गरेरै भएपनि हिट बन्न सक्ने फिल्मको सदस्य बन्न खोजेका त होइनन् ?
२०७४ चैत २९ गते १७:२६ मा प्रकाशित